မူလစာမျက်နှာကျန်းမာရေးလက်ထောက်ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန် Template ပြီးတော့လုပ်ငန်းများ - JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Uncategorized / မူလစာမျက်နှာကျန်းမာရေးလက်ထောက်ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန် Template ပြီးတော့လုပ်ငန်းများ
မူလစာမျက်နှာကျန်းမာရေးလက်ထောက်ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန် Template ပြီးတော့လုပ်ငန်းများ
ယာကုပ် ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized မှတ်ချက် Leave 411 views
လက်ရှိစစ်အစိုးရထိုကဲ့သို့သောဥပမာတစ်သင်းလုံးကကစားသမားဝေဒနာနှင့်ချိန်ညှိရိုးရိုးအနာကပ်ပအဖြစ်ကျန်းမာရေးအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်တဲ့, နှင့်တစ်ဦးစောင့်ရှောက်မှုစွမ်းရည်အတွက်ဒါမှမဟုတ်ကျကွီးရှယျအိုမြားအဘို့အပြင်ပမူးယစ်ဆေးဝါးများလျှောက်ထား, ကျမ်းမာလာခြင်း. ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းအတွက်စာရွက်စာတမ်းသို့မဟုတ်စစ်ဆေးမှုများကိုပြောင်းလဲ. ဒါ့အပြင်ဥပမာအဝတ်လျှော်ဘို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးစေခြင်းငှါ,, ခါးပန်းကို, နှင့်လူနာများ၏ဖြီးလိမ်းပုံ.
အခက်အခဲများ၏ဒေတာကိုသိမ်းဆည်းထားပါ, အခွအေန, ကြိုတင်မဲ, စစ်ဆေးရေးသို့မဟုတ်အခြေအနေမန်နေဂျာနှင့်အတူတွေ့ရှိချက်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်ဆနျးစစျဖို့ဒါမှမဟုတ်လူနာစောင့်ရှောက်မှု.
ကမ်းလှမ်းမှုကို clients များဆေးထည့်သုံးပြီးနှင့်အကူအညီနဲ့ရွေ့လျားနေသည့်အတွက်အတူထွက်-၏အိပ်ခန်း, ရေချိုးသို့မဟုတ်မော်တော်ယာဉ်များဖြီးလိမ်းပုံ.
ထိုကဲ့သို့သောလွတ်လပ်စွာတည်ဆဲအဖြစ်နေရာများတွင် Emotion ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ညွှန်ကြားချက်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီနှင့်လူများကိုဆက်ကပ်, ကျန်းမာသန်စွမ်းဖြစ်ကြောင်းစီစဉ်အစားအစာများ, ကလေးများအပြီးရှာဖွေနေ, သို့မဟုတ်မသန်စွမ်းသို့မဟုတ်အခွအေနေမှတည်ထောင်.
Captivate, သတိပေးသူတို့ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လူနာမှကျယ်လောင်သောဖတ်ကြားခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမျှတတဲ့, သို့မဟုတ်စကားပြော.
အရစ်ကျ, နည်းဗျူဟာ, ပြင်ဆင်ထား, သို့မဟုတ်လူတွေသို့မဟုတ်အပိုဆောင်းမိသားစုယူနစ်အဖွဲ့ဝင်ညစာစားပွဲကူညီ, ပေးထားသောအစားအစာနှင့်အညီ.
လူနာ Verify’ ရိုက်, အပူချိန်, အသက်ရှူ.
ဝယ်ခြင်းဖြင့်မေတ္တာရပ်ခံအဖြစ်အလုပ်အကိုင်များအမျိုးမျိုး Perform, အိမ်မှာထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများလေးလည်းသို့မဟုတ်အိမ်မှုဝေယျာ running အပါအဝင်.
လူနာပွတ်သပ်သို့မဟုတ် liniment အပါအဝင်ဖြည့်စွက်အသုံးချ, အရက်များ rubs, သို့မဟုတ် heatlamp arousal.
အဝတ်လျှော်ခြင်းဖြင့်လူနာတွေအတွက်ဂရုမစိုက်, အဝတ်လျှော်နှင့်သံအဝတ်လျှော်, အိပ်ရာ-အိပ်ရာအသုံးအဆောင်ပြင်ဆင်ခြင်း, သို့မဟုတ်မိမိတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာစောင့်ရှောက်မှု၏အသုံးချနေကူညီ.
ဆေးသမားတို့ကိုချီးမွမ်းစားသုံးသူ’ အလုပ်ခွင်သို့မဟုတ်အိမျတျောကိုပြင်ပမှာနဲ့အခြား outings အပေါ်, ထောက်ပံ့ပံ့ပိုးမှု, ခရီးသွားလာ, နှင့်အဖော်.
ပါးစပ်ဖြစ်ကြောင်းသတ်မှတ်ဆေးဝါးများ Dispense, ဆရာဝန်များ၏တိကျမ်းစာ၌လာသည်လမ်းအောက်သို့မဟုတ် home စောင့်ရှောက်မှုသူနာပြုသို့မဟုတ်အကူအညီနဲ့အားဖြင့်ပဲ့ထိန်းအဖြစ်, နှင့်လူများကသူတို့မူးယစ်ဆေးယူအာမခံ.
နားလညျမှု-အသိပညာ Reading အလုပ်နှင့်ပတ်သက်သောစာရွက်စာတမ်းများအတွက်စာပိုဒ်တိုများနှင့်အပိုဒ် created.
အခြားအရှေးရှေးအခိုင်အမာအရာကို active နားထောင်ခြင်း-ပေးခြင်းတစ်ခုလုံးကိုအသိအမြင်, built ခံရသည့်အမှုအရာနားမလည်ဖို့အချိန်ရတဲ့, မှန်ကန်သောအဖြစ်တောင်းခံမေးမြန်းချက်, အစားမသငျ့လျြောဖြစ်ကြောင်းအခါသမယမှာ mesmerizing ထက်.
လတ်ဆတ်ဖြစ်ကြောင်းပစ္စည်းများသင်ယူခြင်းသို့မဟုတ်ဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့အခါမှာမဟာဗျူဟာ-ရွေးချယ်ခြင်းသင်ယူခြင်းနှင့်ညာဘက်ပြဿနာများအတွက်လေ့ကျင့်ရေး / သင်ကြားပို့ချလေ့အကျင့်များနှင့်နည်းလမ်းများကို အသုံးပြု..
သည်အခြားပုဂ္ဂိုလ်များ၏စောင့်ကြည့်မှုစစ်ဆေး / တွေ့ရှိစွမ်းဆောင်ရည်ကို, မိမိကိုယ်ကို, သို့မဟုတ်အေဂျင်စီများဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုထုတ်လုပ်ရန်သို့မဟုတ်မှန်ကန်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုမှ.
လူမှုသူတို့ကိုတုံ့ပြန်အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကလုပ်ပေးနေချိန်မှာ othersI သဘောထားတွေကိုသတိပြုမိအမြင်-ဖြစ်ခြင်းနှင့်နားလည်နိုင်မှုရှိစေရန်.
အခြားသူတွေ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ control-ထိန်းညှိခြင်းလုပ်ရပ်များ’ လုပ်ရပ်များ.
သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်သို့မဟုတ်အကငျြ့ပြောင်းလဲပစ်ရန် Marketing ကို-စစ်မှန်သောအခြားသူတွေ.
စစ်ဆင်ရေးသုတေသန-ဆန်းစစ်ကို item လိုအပ်ချက်များကိုနှင့်တစ်ဦးစတိုင်ထုတ်လုပ်လို.
installation-Installing tools များ, ထုတ်ကုန်, cabling, လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဒါမှမဟုတ် packages များ.
အတော်ကြာဖြစ်ကြောင်းရည်ရွယ်ချက်များအတွက် encoding-Writing ကွန်ပျူတာ packages များ.
function စောင့်ကြည့်-အကဲခတ်ဘူးသီး, စံအတိုင်းအတာ, သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောလက္ခဏာများသေချာတဲ့စက်ကိုထိရောက်စွာ operating ဖြစ်ပါတယ်စေရန်.
အဲဒီအကြောင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့ဘယ်လို run နေနှင့်ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအမှားတွေနောက်ကွယ်မှ troubleshooting-ဖော်ထုတ်ခြင်းအချက်များ.
အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးသုတေသန-ကွပ်မျက်ကုန်စည်စာမေးပွဲနှင့်အကဲဖြတ်, ဖြေရှင်းနည်းများ, စွမ်းဆောင်ရည်သို့မဟုတ်အရည်အသွေးကိုစစ်ကြောစီရင်တော်မူရန်သို့မဟုတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ.
အာဏာရနှင့်အကောင်းဆုံးသင့်လျော်သောတဦးတည်းရွေးချယ်ဖို့အလားအလာဖြစ်ကြောင်းအပြုအမူနှင့် ပတ်သက်. အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်များတို့နှင့်ကြီးသောအမှုအရာနှင့် ပတ်သက်. ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း-စဉ်းစား.
analysis-ဆုံးဖြတ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရုံကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲ, စစ်ဆင်ရေး, အဖြစ်အခြေအနေများအကျိုးကျေးဇူးများကိုထိခိုက်စေနိုင်ပြီး technique ကိုအဘယျသို့သောလည်ပတ်ရမယ်.
အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု-ထိန်းချုပ်ခြင်းအခြားသူတွေ’ ကာလနှင့်လည်းကိုယ်ပိုင်အချိန် oneis.
ငွေ-ဆုံးဖြတ်ဝင်ငွေ task ကိုပြုမိရကုန်လိမ့်မယ်ဘယ်လိုကြီးကြပ်မှု, နှင့်စာရင်းအင်း, ဤအခကြေးငွေနှင့် ပတ်သက်..
ပစ္စည်း၏စီမံခန့်ခွဲမှုအဓိပ်ပာ-ရယူနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ၏သင့်လျော်သောအသုံးပြုမှုဆီသို့ဦးတည်စောင့်ကြည့်, tools တွေ, နှင့်ပစ္စည်းများသီးခြား function ကိုလုပ်ဖို့အလေးအနက်ထားလိုအပ်.
ဝန်ထမ်းရေးရာအရင်းအမြစ်များ-ထူထောင်အားတက်စရာ၏ကြီးကြပ်မှု, သူတို့သည်မိမိတို့လည်ပတ်အဖြစ်ရှေးရှေးရည်မှန်း, task ကိုများအတွက်အထိရောက်ဆုံးရှေးရှေးအဆုံးအဖြတ်.
အကြီးတန်း High School တွင်ဒီပလိုမာ (သို့မဟုတ် GED သို့မဟုတ်မြင့်မားသော-ကျောင်းနှင့်ညီမျှစာရွက်စာတမ်း)
Link ၏ဘွဲ့ (သို့မဟုတ်နောက်ထပ် 2-နှစ်အဆငျ့)
ဇှဲကောငျးခွငျး – 87.35%
ကြိုးစားအားထုတ်မှု – 83.45%
ထိန်းချုပ်ရေး – 84.69%
ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး – 95.23%
အခြားသူများနှင့် ပတ်သက်. ပြဿနာ – 94.94%
ယဉ်ကျေးမှုနေရာချထားခြင်း – 89.63%
မိမိကိုယ်အားထိန်းချုပ်ခြင်း – 94.65%
ဖိအားစာနာထောက်ထားရေး – 89.00%
ပါဝင် – 95.22%
အသေးစိတ်၏အသိအမြင် – 95.11%
ကျင့်ဝတ် – 95.66%
လွတ်လပ်ခြင်း – 92.43%
တိုးတက်ရေး – 86.81%
analytical အတွေးအခေါ် – 81.02%